आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चल्ने:अरु के-के गर्न पाइन्छ,के पाइँदैन? |
आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चल्ने:अरु के-के गर्न पाइन्छ,के पाइँदैन?
June 29, 2021 June 29, 2021 adminLeaveaComment on आजदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चल्ने:अरु के-के गर्न पाइन्छ,के पाइँदैन?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने भएको छ। सोमबार बसेको उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले खुकुलो बनाउँदै एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले आजबाट जोर-बिजोर प्रणालीअनुसार सार्वजनिक यातायात बिहान ६ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिइने भएको हो । काठमाडौंका सीडीओ कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार २५ सिट वा सोभन्दा माथि सिट क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन जोर-बिजोर प्रणालीबाट सञ्‍चालन गर्न पाइने छ ।
बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म चलाउन पाइने सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, बसमा स्यानिटाइजर राख्ने तथा सिटमा यात्रुको दूरी कायम हुनुपर्ने जनाइएको छ । गत वैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञामा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिइएको थिएन ।
लामो दूरीका सवारी साधन भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन।थपिएको एक साता निषेधाज्ञामा सरकारी, सार्वजनिक संस्थान, कुटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि, मल, बिउ विजन, पशु चिकित्सक लगायत अत्यावश्यक सेवा प्रदायक सवारी साधनहरु निर्वाध रुपले संचालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
यस्ता ७ काम गर्नुहोस्,जसबाट क्षणभरमै बन्न सकिन्छ करोडपति
अब सरकारले क्यान्सर र मिर्गौला रोगीलाई मासिक पाँच हजार र विपन्न गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दिने